နေအိမ်» PCBA- ဘလော့ဂ်» ပြင်ပစားသုံးသူ PCB ညီလာခံသည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးစေသည်
ပြင်ပစားသုံးသူ PCB ညီလာခံသည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးစေသည်
2020-05-25 အပေါ် Posted
စားသုံးသူ PCB စုဆောင်းမှု အချိန်အပါအဝင်အရင်းအမြစ်တွေအများကြီးကြာပါတယ်။ လက်လီစျေးကွက်အတွက်ထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်သည်။ သင်၏ PCB များ ကသင့်အားအချိန်သက်သာစေသည်။
If some of your team members are spending their time every day on consumer PCB တပ်ဆင်မှု , training them in that area may not benefit your company. In the medium or long term, that type of financial investment may not deliver the type of returns you want. Investing in training related to core areas of your business, instead of on further training in consumer PCB တပ်ဆင်မှု , would deliver greater financial rewards.